Ipholisi Yamaphathi kanye Nemicimbi - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ipholisi Yamaphathi kanye Nemicimbi
Phawula: Kusukela ngo-August 20, 2020, i-Airbnb yamemezela ukuvinjelwa emhlabeni wonke kwawo wonke amaphathi nemicimbi ezindlini ze-Airbnb, kanye nomkhawulo wabantu abangu-16, okuhambisana nezinqubomgomo zomphakathi wethu. Lokhu kuvinjelwa kwamaphathi kusebenza kukho konke ukubhukha okuzayo e-Airbnb, futhi kuzoqhubeka kusebenza isikhathi esinganqunyiwe, kuze kube kushiwo okuhlukile.
Izindinganiso Zomphakathi zethu zivimbela amalungu Omphakathi we-Airbnb ekwenzeni izinto ezicasulayo eziphazamisa omakhelwane. Ababungazi nezivakashi bangawuhlonipha lo mthetho ngokuqiniseka ukuthi bayavumelana ngalokho okulindelekile ngemicimbi ezindlini. Nakuba sikholelwa ukuthi izivakashi eziningi ziyahlonipha, siye sasungula inqubomgomo yethu yamaPhathi Nemicimbi ukuze sinikeze isiqondiso esicacile salokho okulindelekile kuwo wonke umuntu. Kuze kukhishwe esinye isaziso, le nqubomgomo ivimbela:
Imibuthano yabantu abangaphezu kuka-16
Wonke amaphathi nemicimbi enomsindo
Izivakashi ezibikwe ukuthi zenze umcimbi onomsindo noma zephula imithetho yethu emicimbini yabantu abangaphezu kuka-16 zingamiswa okwesikhashana noma zikhishwe enkundleni ye-Airbnb. Kwezinye izimo, ukuphawula kwezivakashi okushiywe ngemva kwamaphathi anjalo kungase kususwe. Singazikhipha izindlu uma sibona ukuthi uMbungazi ugunyaze iphathi ephula inqubomgomo yethu. Uma sithola imibiko yokuthi indlu iphazamisa umphakathi ozungezile, singase sicele ukuba uMbungazi alungise imithetho yakhe noma siyimise okwesikhashana leyo ndlu.
Ngaphezu kokuqinisa imithetho yethu yamaphathi, sithuthukisa nobuchwepheshe bokubona izingozi ezisiza ekuvimbeleni amaphathi aphazamisayo ngaphambi kokuba aqale nokuqala.
Kuze kukhishwe esinye isaziso, imibuthano yabantu abangaphezu kuka-16—okuhlanganisa izivakashi ezibhukhe ukulala nezingeke zilale—ayivunyelwe, kungakhathaliseki ukuthi uMbungazi ugunyazile yini noma cha.
Kuze kukhishwe esinye isaziso, wonke amaphathi nemicimbi ephazamisayo kuvinjelwe, kungakhathaliseki ukuthi makhulu kangakanani. Ama-akhawunti ezivakashi ezinalolu hlobo lwemicimbi angase akhishwe, futhi aBabungazi abephula lo mthetho futhi abavumela izivakashi ukuba zenze amaphathi bangase babhekane nemiphumela ehlanganisa ukukhishwa kwendlu yabo.
Uma indlu efakwe ku-Airbnb ibangela ukuphazamiseka—kungakhathaliseki ukuthi ngumsindo omkhulu, yiphathi ephazamisayo, umbuthano wabantu abangaphezu kuka-16, noma ukuziphatha okungaphephile—amalungu omphakathi wendawo angakubika lokho ku-Neighborhood Support, ehlinzeka ngelinki yamasevisi endawo ezimo eziphuthumayo. Azophinde akwazi nokuthola inombolo yocingo leqembu le-Neighborhood Support, lapho bengabika khona iphathi esaqhubeka. Lapho inkinga isibikiwe, i-Airbnb izothumela i-imeyili yokuqinisekisa echaza okuzokwenzeka ngokulandelayo.
Izinyathelo zephathi engagunyaziwe
Ukunciphisa inani lamaphathi asendlini angagunyaziwe ku-Airbnb kade kuyinto esemqoka. Sithatha izinyathelo ukuze sisekele uhambo oluphephile nolubonisa ukucabangela. Njengengxenye yokuvinjelwa kwamaphathi emhlabeni, singase sivimbele ukubhukha okuthile esibona kungaba nengozi enkulu yamaphathi angagunyaziwe.
Iziqondiso zokufakwa endlini
Mayelana nale nqubomgomo, aBabungazi akufanele bahehe amaphathi nemicimbi ephazamisayo emakhaya abo ngokukhangisa ngezindawo zabo njengezifanelwe amaphathi nemicimbi. Ngendlela efanayo, aBabungazi akufanele bakhangise ngokuthi izindawo zabo zifanelwe imibuthano enabantu abangaphezu kuka-16.
Izindlu eziphula le mithetho ngesihloko sendlu, incazelo, imithetho yendlu, izithombe, njll., zingase zimiswe okwesikhashana kuze kususwe lokho okufakiwe okwephula umthetho. Lapho sithole khona izikhalazo ngendlu eyephula lo mthetho, singase futhi siyimise okwesikhashana leyo ndlu izinsuku ezingaba ngu-30 futhi sicele uMbungazi ukuba alungise indlu yakhe ukuze ibe nomthetho ocacile oshoyo ukuthi amaphathi nemicimbi akuvunyelwe.
Ezimweni ezingavamile lapho kubonakala ukuthi indlu ihloselwe kuphela izinjongo zokubungaza amaphathi nemicimbi (ngokwesibonelo, izindawo zamaphathi nemicimbi), noma lapho indlu iye yabangela izikhalazo eziningi emphakathini, leyo ndlu ingase ikhishwe unomphela ku-Airbnb.
Imithetho esebenza ezinhlotsheni ezihlukene zezindlu
Amasethingi okwamukela izivakashi avamile
Siyabethemba aBabungazi bezindawo zokwamukela izivakashi ezivamile (njengama-boutique hotel) ukuba bazibekele eyabo imithetho yemicimbi. ABabungazi abamukela izivakashi ngendlela evamile bangavumela imicimbi efanelekayo ngokwahlulela kwabo. Ezimweni lapho sithola izikhalazo ngalezi zindlu nemicimbi noma lapho izinhlobo zemicimbi zingafaneleki, sizolandelela kulezo zindawo ngokwesidingo.
Okufanele ukwazi uma umakhelwane wakho enguMbungazi we-Airbnb
Sikhuthaza ababungazi ukuba bacabangisise ngemithwalo abanayo. Ukubungaza kuhambisana nesibophezelo komakhelwane nasemphakathini.
Le mithetho iyiqoqo lezimfuneko okulinganiswa ngazo izindawo eziklanywe kahle naBabungazi abahamba phambili.